लन्डन । दस वर्षअघि सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीचको बृहत् शान्ति सम्झौतायता कैयौं रूपान्तरणकारी घटना भए पनि बहिष्करणमा परेका समुदायको समावेशिताका सबालमा अझै निकै काम बाँकी रहेको विज्ञले औंल्याएका छन् । लन्डनस्थित स्कुल अफ ओरियन्टल एन्ड अफ्रिकन स्टडिज ९सोआस० को दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्र तथा लन्डनस्थित कन्सिलियसन रिसोर्सेज नामक संस्थाद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले […]
विभिसीका भण्डारी फाइल तस्विर । फाल्गुन २५, २०७३- महिला, पुरुष र हाम्रो समाज । जान्ने र बुझ्ने भएदेखि नै लैंगीक विषयमा जान्ने र कुरा सुन्ने र मुल्यांकन गर्न मन लाथ्यो । पछि यसै बिषयमा ऐकेडेमिक रुपले नै अध्ययन गर्ने सोच बनाएँ । जेन्डर एन्ड बुमन स्टडिजमा स्नातक पनि गरें । मैले सुनेको र पढेको जेन्डर […]
ईन्डोनेसियाले यौनहिंसा गर्नेलाई रासायनिक पद्धतिबाट नपुंसक बनाउने कानुन ल्याएछ ! हाम्रो नेपालमा त बलत्कारी पनि खुल्लमखुल्ला हिड्छन् न कानुन डर !
नारीलाई रजस्वलाको प्रथम दिन चण्डाल्नी, दोस्रो दिन ब्रह्मघातिनी, तेस्रो दिन धोबिनी र चौथो दिन स्नान गरी शुद्ध हुन्छिन् भन्ने मान्यताले लिइदो रहेछ ऋषीपञ्चमीको ब्रत ।
ऋषि पञ्चमीको ब्रतकथाले रजश्वलालाई #पाप भनेकोले मैले यो व्रत कहिलै गरिन, मलाई कसैले दबाब पनि दिएन । न मेरा श्रीमानले रजश्वलालाई #पाप भनेको सुनेँ कहिलै न मेरो छोराले भन्नेछ । जबसम्म हामी महिलाहरूले नै यसलाई #पाप ठान्छौ तबसम्म ऋषिपन्चमीको ब्रतले निरन्तरता पाइरहने छ । किन हामी महिलाले यसदिन बिदा चाहिन्न भनेर राज्यसङ्ग नभन्ने ? हिम्मत […]
‘माधवी’ हेरेर फर्केपछि
शिल्पीमा ‘माधवी’ हेरेर फर्केपछि,
ह्रदय रोइरहेछ ।
अरुणा रायमाझीको फेसबुकबाट
राज्यको हरेक निकायमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने माअोबादी । आफ्नै सरकारमा ५ हटाएर ,0,शुन्य !! ‪#‎कुरिकुरि‬# ‪#‎पम्फाजयपुरी‬#
शुशील मैनालीको फेसबुकबाट
सर्वोच्चमा ३ जना महिला न्यायधिश भएकोमा निकै खुशियाली मनाइयो ।
डा राजेश अहिराजको फेसबुकबाट
प्रधानमन्त्री जिउ, प्रेस काउन्सिल त पुरुष काउन्सिल भो । लौन हजुर, महिला को स्थान सुरक्षित गरौं ।